Matanho akakosha etsika yakanaka yekunaka | Bezzia
Toñy Torres | 11/09/2021 20:00 | Runako
Kutevera yakanaka runako tsika yakakosha kune nakidzwa neganda rine hutano uye rakanaka. Asi nhasi kune zvigadzirwa zvakawanda uye zvakawanda zvakasiyana-siyana muzvipoda zvekuti zvakajairika kuti unzwe kuremerwa kana kurasika. Vanhu vazhinji vanotova nekusahadzika nezve kuwanda, kubatsira kwezvigadzirwa uye kunyangwe kurongeka kwakakodzera kuti uzviise.
Asi zvakare hachisi chinhu chinobata vechidiki chete kana avo vasina kumbotevedzera runako maitiro. Kunyangwe nyanzvi kwazvo inogona kusahadzika nezvayo, nekuti nhasi kune ruzivo rwakawanda pamusoro pekuchengetwa kweganda, asi haisi kuwanikwa nguva dzose kune wese munhu. Pano tinokuratidza izvo zvavari matanho akakosha ekutanga tsika yakanaka yerunako.
1 Runako tsika, masikati, husiku uye kunyangwe ukasapfeka zvekuzora
1.1 Kuchenesa pamwe kana pasina makeup
1.2 Kuisa mvura
Runako tsika, masikati, husiku uye kunyangwe ukasapfeka zvekuzora
Kuchenesa ganda rako zuva rega rega idanho rakakosha kwazvo mune yakanaka runako maitiro, kunyangwe iwe uchishandisa makeup kana kwete. Paunenge uchizora makeup zviri nyore kuona zvinodiwa yeganda, nekuti zvigadzirwa zvinosanganisa muviri masikati uye mumwe anonzwa kuda kubvisa zvigadzirwa zvese asati arara. Asi kana iwe usiri kuzora makeup, zvinogona kuve zvakaoma kuona basa rekushambidza kumeso.
Nekudaro, izvo zvakakoshawo kune yakanaka runako maitiro, sezvo panguva yeganda ganda rinotora kusvibiswa, guruva uye vekunze vamiririri avo anotyisidzira hutano hwakanaka hweganda. Nenhanho shoma dziri nyore unogona kubvisa tsvina iyi kuitira kuti ganda rechiso rigone kufema uye kumutsidzira panguva yehusiku. Naizvozvo, nhanho yekutanga yakakosha kune yakanaka runako tsika kuchenesa.
Kuchenesa pamwe kana pasina makeup
Ukatakura cheno iwe uchafanirwa kushandisa chaiwo marongedzero kubvisa zvigadzirwa. Zviri nani kushandisa kuchenesa mukaka uye kubvisa ziso kubvisa, sezvo ivo vakanyanya kusimba uye vanoremekedza neganda rechiso nemeso. Kana iwe usina chero yekuzora, ingoshandisa iyo micellar mvura. Chero zvazvingaitika, pedzisa kuchenesa nesipo yakapfava, pasina parabens kana silicones.
Iyi yekupedzisira nhanho yakakosha nekuti hapana micellar mvura, kana make-up inobvisa mukaka, kana chero chaiyo yekuzora inogona kubvisa zvachose zvisaririra zvezvigadzirwa kubva paganda, zvinotosiya zvasara. Nesipo nemvura iwe uchapedza yakanaka yekuchenesa. Chii chimwe, sipo nemvura idanho rekutanga kunyangwe mangwanani, usati waenderera netsika yekunaka.
Pakati pekuchenesa uye hydration unogona kuisa mamwe matanho mune yako yekujaira tsika, asi kana iwe usina nguva kana iwe uchangotanga munyika yerunako maitiro, zviri nani kutanga nematanho akakosha. Kana iwe uchida kuwedzera kana kugadzirisa yako kumeso kutarisirwa, iwe unogona kuwedzera iyo toner iyo inoiswa mushure mekuchenesa ganda uye usati waisa zvimwe zvigadzirwa.
Iyo serum ndiyo yekuwedzera hydration inoiswa pamberi peanodzikisira Uye kana iwe uine ganda rakaoma, rakakura kana unoda imwe hanya, unogona kuisa madonhwe mashoma eseramu mangwanani uye neusiku. Nekudaro, nhanho idzi hadzinyatso kudikanwa uye nekudaro hadzisanganisirwe mune chingave chinhu chekutanga kunaka kwerunako. Kune izvi, chete kuchenesa uye hydration zvinodiwa.
Ikozvino, kunyorovesa ganda kwakakosha kune vese vadiki uye vakura ganda. Nekuti ndiyo kiyi yekudzivirira kukwegura nguva isati yakwana uye hutano husina hutano hweganda. Wana mazano akanaka usati watenga moisturizer yako, nekuti rimwe nerimwe ganda rine zvido zvaro. Hongu zvirokwazvo, zora chako moisturizer yechiso mangwanani uye nehusiku, nguva dzose mushure mekuchenesa.
Kupedzisa tsika yekutanga runako, usakanganwa gwara reziso. Hauna kumbobvira uri mudiki kwazvo kuti utange kutarisira ganda rakawedzera rakatenderedza maziso ako. Zvinongotora imwezve mineti uye iwe unodzivirira kukwegura usati wakurumidza munzvimbo iyoyo. Nenhanho idzi dzakareruka, iwe unenge uine inopenya, yehudiki uye ine hutano ganda mumaminetsi mashoma.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Runako » Matanho akakosha etsika yakanaka yekunaka